विपद् व्यवस्थापन चुस्त बनाऊ
भारी वर्षाका कारण देशैभरि धेरैको ज्यान गएको छ । धेरै घरबारविहीन भएका छन् । यस वर्षको मनसुन सक्रिय हुँदा देशभर अविरल वर्षा भइरहेको छ । ठाउँ–ठाउँमा वर्षाका कारण पहिरो गएको
ओलीलाई सत्ताको उन्माद लागेकै हो ?
दुई तिहाइ बहुमत पाएपछि ओली सरकार अलि निरंकुश भएको महसुस भएको छ । उपकुलपतिजस्तालाई बालुवाटारमा थुन्ने, गोविन्द केसीलाई मरे मरोस् भन्ने गैरजिम्मेवार काम हुँदै आएको छ । बोलीमा समाजवाद र
प्रहरी जिम्मेवार बन
जप गर्ने माला तयार गर्न तिब्बतीहरूले प्रयोग गर्ने बोधिचित्त काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको तेमाल क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र नपाइने भएकोले यसको मूल्य ज्यादै छ । एउटै बोटमा करिब सय केजी फल्ने भएकोले बोधिचित्तको
खै द्वन्द्वपीडितको सुनुवाइ ?
दशबर्से सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित भएका द्वन्द्वपीडितले न्यायको याचना गरेको १२ वर्ष बितिसकेको छ । तर, द्वन्द्वपीडितको पीडामा मलहम लगाउने काममा भने सरकार उदासीन देखिएको
विपद्मा असुली धन्दा
मनसुन शुरु भएसँगै परेको अविरल वर्षाका कारण सडकमाथिबाट खसेका पहिरोका कारण जिल्लाका अधिकांश कच्ची सडक बन्द भएका छन् । यसै वर्ष ट्रयाक खुलेका र केही वर्षपहिला बनाइएका सडकसमेत पहिरोका कारण